Yiba I-VMI (uMthengisi oLawula uluhlu lwempahla)-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
I-Fumax inenkqubo yoLawulo loMthengisi (VMI) apho inika abathengi indlela yokuphucula ukusebenza kwe-Supply Chain.Inkqubo ye-VMI inoxanduva lokugcina uluhlu lwempahla kubo ngokweenkcukacha ezichazwe kwangaphambili.
Iqela ligcina umkhondo wokuba yeyiphi imveliso efumanekayo edinayo ngokusekelwe kwiingxelo zentengiso kwaye ikwalawula isitokhwe sokuzalisa.
INkqubo ye-VMI iluncedo xa umthengi ephelelwe sisitokhwe okanye efuna isitokhwe se-backup, njengoko igcina iindleko zokugcina kunye nengxaki yokugcina amanqanaba oluhlu.
Kungcono, iNkqubo ye-VMI iphinde idibaniswe neNkqubo ye-MTO (Yenziwe kwi-Order) kunye ne-JIT (Ngexesha nje) Inkqubo yonikezelo.
Le nkqubo inenzuzo kwiinyanga ezi-3-6 zeemveliso ezigqityiweyo ukwenzela ukuba umthengi angabikho ngaphezulu okanye ngaphantsi kweemveliso ezifunwayo.Ayincedi kuphela ekugcineni ubukho besitokhwe ngokweemveliso ezi-odolwe ngumthengi, ezijongwa rhoqo ngeveki okanye ngenyanga kodwa zikwagcina elubala ukusetyenziswa kweemveliso ngenyanga.
Ekugqibeleni, i-Inventory Management Inventory ivumela umthengi ukuba agxininise ekuthengiseni iimveliso zabo ezininzi, ngelixa egcina iithebhu kwi-inventory yabo kunye nokufumaneka kwempahla, ukugcina ukusebenza kakuhle kunye nokuphendula ngokukhawuleza kwii-odolo.
Ziziphi iiNzuzo ze-VMI?
1. I-Inventory ebhityileyo
2. Iindleko zokusebenza eziphantsi
3. Ubudlelwane boMboneleli oBomelele
IFlex PC IPcb enamacala amabini Odm PCba IPcb Fabrication kunye neNdibano Ibhodi yeSekethe eprintiweyo IRigidFlex Pcb